Siyaasadda Soo Celinta - TurboMedia.io
Waxaanu bixinnaa alaab aan la isticmaali karin. Macaamiil ahaan waxaad mas'uul ka tahay fahamka tan markii aad soo iibsato wax soo saarka / adeeggaaga boggayaga.
99% dhibaatooyinka waxaa lagu xallin karaa email fudud. Waxaan codsaneynaa inaad naga gaarto adigoo isticmaalaya "Nala soo xiriir"Bogga. Waaxda Adeegyada Macaamiishu waxay kuugu soo laaban doontaa 24-48 (badanaa ka yar saacadaha 24) oo dib u eegis ku sameeya dareenkaaga, iyo xal.
Qaadida alaabta / adeegga: mararka qaarkood waqtiyada geedi socodka ayaa ah mid gaabis ah, oo waxay qaadataa waxoogaa waqti dheer ah amarkaaga si aad u dhameysatid. Xaaladdan, waxaan kugula talineynaa inaad nagala soo xiriirto gargaar. Sheegashooyinka aan la keenin waa in loo soo gudbiyaa Waaxda Adeegyada Macaamiisha qoraal ahaan gudahood 7 maalmood laga bilaabo bixinta amarka.
Waxyaallaha aan la sheegin: arimaha noocan oo kale ah waa in lagu soo wargeliyaa Waaxda Adeegyada Macaamiisha maalmaha 7 laga bilaabo taariikhda iibsashada. Caddaynta caddaynta waa in la caddeeyaa in alaabta / adeegga la iibsaday uusan ahayn sida lagu sharxay bogga. Cabashooyinka ku saleysan oo keliya macaamiishiisa waxa laga filayo ama rajooyin aan la sheegin laguma sharfo.
Macmiilku wuxuu rabaa inuu joojiyo dib u bixinta bixinta alaabta / adeegga oo uu ku jiro maalmaha 7 ee bixinta ugu dambeysa. Haddii codsi loo sameeyo lacag celin kadib maalmaha 7 ee macaamilka uusan u qalmin, oo la joojin doono dhamman biilasha mustaqbalka. Qofka macaamilka ayaa sii wadi kara inuu helo adeegga illaa dhamaadka wareegga biilka, ama wuxuu doortaa inuu joojiyo isla markiiba alaabta / adeegga.
LAGA HELAYAA QALABKA